Dhageyso :-G.Maxkamadda G.Banadir. “Ma jiro Xabsi u gaar ah Carruurta somaliyed waxaa lala xiraa dadka waa weyn” - Awdinle Online
Dhageyso :-G.Maxkamadda G.Banadir. “Ma jiro Xabsi u gaar ah Carruurta somaliyed waxaa lala xiraa dadka waa weyn”
February 23, 2020 (Awdinle Online) –Muuse Macalin Maxamed oo ka hadlay Xaaladda Xabsiyada dalka waxa uu soo hadal qaaday in uusan jirin Xabsi u gaar ah Carruurta oo lagu dhaqan celiyo, isla markaana lala xiro dadka waa weyn.
Guddoomiye Muuse waxa uu tilmaamay in dhibaato nololeed ay ku tahay Carruurta marka lala xiro Dad ka da’ weyn, maadaama ay ka duwan yihiin dhaqan ahaan dadkaas, waxaana uu soo jeediyay in loo dhiso meel u gaar ah.
“Carruurta ma qaadan Koriimo ku filan jirkooda, waxaa suurta gal ah in lala xiro dad ka da’ weyn oo ay macquul tahay in ay galeen dambiyo kala duwan sida in ay dilal geysteen, waxaan codsanayaa in loo dhiso qolal u gaar ah, waxaana ku filan labo qol oo loo dhameystiray waxyaabaha ay u baahan yihiin” ayuu yiri Guddoomiye Muuse.
Waxa uu soo jeediyay in mas’uuliyad la iska saaro Xabsiyada oo ah goobta lagu hayo dadkala xukumay iyo kuwa maxkamd sugayaasha ah.
“Labo todobaad kahor waxa aan Xabsiga dhexe kasii daayay labo carruur ah oo lagu helay dambiyo cad, balse sababta aan u sii daayay waxa ay ahayd in aysan gaarsiineen da’da ay mas’uulka ugu noqon karaan fal dambiyeedka, Xabsiga dhexe kuma ogi in uu leeyahay goobo u gaar ah Carruurta” Muuse Macalin Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir.
Wasaaradda Caddaaladda, Maxkamadaha, Guddiga Garsoorka iyo Caddaaladda u qaabilsan BFS waxa uu ka dalbaday in ay lacago u uruuriyaan sidii loo dhisi lahaa Qolal u gaar ah oo ay carruurta si aan loo dhex gelin dadka ka da’da weyn.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir Muuse Macalin Maxamed waxa uu hadalkaan ka jeediyay munaasabad lagu maamuusayay 50-sano guuradii kasoo wareegtay Aas-aaska Ciidamada Asluubta oo xalay lagu qabtay Xabsiga Dhexe ee Xamar.
Previous articleAxmed Madoobe oo bilaabay qorshe uga hortagayo dhaq-dhaqaaqyada Ciidamada Dowladda
Next articleQadar oo booqasho qarsoodi ah ku tegey Madaxa Sirdoonka Israel